Fandraharahana amin’ny kanto: niampy iray ireo fanamafisam-peo goavana eto amintsika | NewsMada
Fandraharahana amin’ny kanto: niampy iray ireo fanamafisam-peo goavana eto amintsika
Notanterahina omaly, tao amin’ny kianja Malacam etsy Antanimena, ny fitsofan-drano ny fitaovana vaovao, an’ny Bemozika, orinasa mandraharaha eo amin’ny tontolon’ny zavakanto. Tsy inona izany fa fanamafisam-peo, manana tanjaka 52.000 Watt, izay efa ela no nirin’ny mpitantana ity orinasa ity, i Samoëla.
“Tao anatin’ny 17 taona no efa niketrehana fitaovana toy izao, saingy ankehitriny moa izany vao tanteraka”, hoy hatrany ity mpanakanto ity. Sady naseho ampahibemaso voalohany no notsofin’ny mpitandrina, avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy, rano ireo fitaovana vaovao. Taorian’izany, ny tolakandro, nisy ny fanandramana ireo fanamafisam-peo vaovao ka maromaro ny mpanakanto nisantatra izany sy nitsapa ny tanjany. Tao koa ireo manampahaizana sy efa za-draharaha amin’ity tontolo ity, tonga nijery ny zava-baovao, entin’ny Bemozika.
Araka ny fanazavana hatrany, tany amin’ny “salon” iray momba ny fitaovana amin’ny fanamafisam-peo sy ny seho an-tsehatra, tany Alemaina, no nahitana ireto “sonorisation” ireto. Ny mampiavaka azy, kelikely sy tsy mibahan-toerana ireo fitaovana kanefa matanjaka tsara, mahazaka ireo toeram-pampisehoana lehibe eto amintsika, toy ny Coliseum.